ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းကဘာလဲ? | Law & More BV
ဘ‌‌လော့ခ် » ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းကဘာလဲ?
INTELLECTUAL ပိုင်ဆိုင်မှု (IP) ဥပဒေ
PHILANTHROPY & လူမှုရေးဖောင်ဒေးရှင်းများ
အိမ်ခြံမြေနှင့်အိမ်ခြံမြေအရောင်းအ ၀ ယ်
Real Estate ဥပဒေ
အောက်တိုဘာလ 6, 2020
သင် Corona စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့ပါသလား။ ထို့နောက်မကြာသေးမီအချိန်အထိသင်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းရှိခြင်းခံရနိုင်သည်။ Corona ဒဏ်ငွေများဆက်လက်တည်ရှိနေသော်လည်းရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်စုမရှိတော့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများအောက်လွှတ်တော်ဘက်၌ထိုကဲ့သို့သောဆူးဖြစ်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ကဒီအတိုင်းအတာဖျက်သိမ်းဖို့ရွေးချယ်ကြပြီလော
အကယ်၍ သင်သည်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပါကသင်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းကိုရနိုင်သည်။ ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းကိုလည်းတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများထုတ်ယူမှုဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းသည်တရားရေးစာရွက်စာတမ်းစနစ်အတွင်းမှတ်ပုံတင်ထားသောပြစ်မှုများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ ဤနေရာတွင်ရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့်ပြစ်မှုများအကြားခြားနားချက်သည်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်သင်၏ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းတွင်အမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပါက၎င်းသည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ထိုသို့အမြဲတမ်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ ပြစ်မှုများသည်အသေးအဖွဲပြစ်မှုများဖြစ်သည်။ ယူရို ၁၀၀ ထက်ပိုသောဝါကျ၊ ထုတ်ပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေယူရို ၁၀၀ ထက်ပိုသောဒဏ်ငွေဖြင့်အပြစ်ပေးခံရသည့်အခါပြစ်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ရာဇ ၀ တ်မှုများမှာခိုးမှု၊ လူသတ်မှုနှင့်မုဒိမ်းမှုစသည့်ပိုမိုကြီးလေးသောပြစ်မှုများဖြစ်သည်။ Corona ဒဏ်ငွေများသည်ဒဏ်ငွေယူရို ၁၀၀ ထက်ကျော်လွန်သောဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယခုအချိန်အထိတရားရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများတွင် Corona ဒဏ်ငွေချမှတ်သည့်အခါမှတ်စုရေးထားသည်။ ဇူလိုင်လတွင်ဒဏ်ငွေပေါင်း ၁၅၀၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည်။ တရားရေးနှင့်လုံခြုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီး Grapperhaus သည်သူကိုယ်တိုင်ဒဏ်ငွေရရှိခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာဆောင်တွင် Corona စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုအတွက်ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းရရှိပြီးနောက်၊
ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအပေါ်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိသည်။ သင်အလုပ်တစ်ခုလျှောက်ထားသောအခါ VOG (ကောင်းမွန်သောအပြုအမူလက်မှတ်) ကိုတစ်ခါတစ်ရံလျှောက်ထားသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အပြုအမူသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိတာ ၀ န်တစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခု၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကန့်ကွက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပြသထားသောကြေငြာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းသည်သင် VOG မရရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ရှေ့နေ၊ ဆရာ၊ တရား ၀ င် ၀ န်ထမ်းစသည့်အလုပ်အကိုင်များကိုသင်ခွင့်မပြုတော့ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံဗီဇာသို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ကိုငြင်းဆန်နိုင်သည်။ အာမခံကုမ္ပဏီသို့လျှောက်ထားသောအခါသင်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းရှိမရှိကိုလည်းအာမခံကုမ္ပဏီမှမေးမြန်းနိုင်သည်။ ထိုကိစ္စတွင်သင်သည်အမှန်တရားကိုပြောပြရန်တာဝန်ရှိသည်။ ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းကြောင့်သင်အာမခံမရနိုင်ပါ။
မင်းမှာရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းရှိမရှိမသိဘူးလား။ တရားရေးဆိုင်ရာသတင်းဝန်ဆောင်မှု (Justid) သို့စာသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်သင်၏ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းကိုသင်ရယူနိုင်သည်။ Justid သည်တရားရေးနှင့်လုံခြုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သဘောမတူပါကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုသင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဒါကိုအမှားပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုလို့ခေါ်တယ်။ ဤတောင်းဆိုမှုကို Justid ၏ရှေ့ရုံးသို့တင်ပြရမည်။ လေးပတ်အတွင်းတောင်းဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ စာဖြင့်ရေးသားချက်ကိုသင်ရလိမ့်မည်။ အချို့သောထိန်းသိမ်းထားသည့်ကာလများသည်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုများရှိတရားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်သည်မည်မျှကြာကြာတည်ရှိနေရမည်ကိုဥပဒေကဆုံးဖြတ်သည်။ ဤကာလများသည်ပြစ်မှုများအတွက်ထက်ပြစ်မှုများအတွက်တိုတောင်းပါသည် ရာဇ ၀ တ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အခါဥပမာအားဖြင့် Corona ဒဏ်ငွေကိစ္စတွင်ဒဏ်ငွေအပြည့်အ ၀ ပေးပြီး ၅ နှစ်အကြာတွင်ဒေတာများကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းသည်ဤကဲ့သို့သောကြီးမားသောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်သင်သည် coronafine တစ်ခုရရှိခဲ့ပါကသို့မဟုတ်ပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့ပါကရှေ့နေနှင့်အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်နိုင်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်အစိုးရရှေ့နေနှင့်ဆန့်ကျင်မှုများကိုပြုလုပ်ရမည့်အချိန်ကာလတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရန်သို့မဟုတ်ရပ်ရွာလူထုဝန်ဆောင်မှုကိုလိုက်နာရန်မှာလွယ်ကူပုံရသည်၊ ဥပမာရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူအခြေအနေကိုရှေ့နေတစ် ဦး မှအကဲဖြတ်ခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ ထို့အပြင်အစိုးရရှေ့နေသည်အမှားများပြုလုပ်မိခြင်း (သို့) အမှားများကျူးလွန်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အစိုးရရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားသူကြီးသည်ဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ပြစ်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်သောတာဝန်ရှိသူများထက်တစ်ခါတစ်ရံ ပို၍ သက်ညှာမှုရှိနိုင်သည်။ ရှေ့နေတစ် ဦး သည်ဒဏ်ငွေဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးနိုင်ပြီးအယူခံဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းလားဆိုတာသင့်အားအသိပေးနိုင်သည်။ ရှေ့နေသည်အတိုက်အခံ၏အသိပေးစာကိုရေးပြီးလိုအပ်ပါကတရားသူကြီးကိုကူညီနိုင်သည်။
အထက်ပါအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါသလား။ သို့မဟုတ်သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသိလိုပါသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ရှေ့နေများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ Law & More ပိုမိုသိရှိလိုပါက။ သင်ရှေ့နေလိုအပ်လားမသေချာရင်တောင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနယ်ပယ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူနှင့်အထူးပြုရှေ့နေများကသင့်အားကူညီပေးလိုသည်။
ယခင် Post မှ ထုတ်ပစ်ခြင်း
Next Post ကွာရှင်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ပါ
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Law & More BV